'USUKU LWE-90 FIANCE' ISIQENDU SESI-7 SOKUKHUMBULA KWAKHONA: UCAROLINA UNGENA NOFERNANDO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato I-'90 Day Fiance 'Ixesha lesi-3, Isiqendu sesi-7 sokuBuyisa kwakhona: UCarolina ungena noFernando kunye noSapho
I-'90 Day Fiance 'Ixesha lesi-3, Isiqendu sesi-7 sokuBuyisa kwakhona: UCarolina ungena noFernando kunye noSapho
Kwisiqendu sesixhenxe sexesha le-'90 Day Fiance 'sexesha lesi-3, uCarolina ufumana i-visa yakhe yokutshata kwaye uya kuhlala noFernando nabazali bakhe. Ityala: TLC
Ngu: Kelly Spears 11/23/2015 kwi-1: 20 PM
Uyawazi umgca odumileyo, Yonke into oyifunayo luthando? Ewe, isiqendu samva nje se- Umtshato weentsuku ezingama-90, eyaqala ngoNovemba 22 , banokuba nabalandeli beqikelela okwesibini loo logic.
Isiqendu, esinesihloko esithi Musa ukundityhala, yi-hodgepodge yoloyiko kunye neengxoxo ezixineneyo. Ababukeli banqwenela ukuba izibini zingakhululeka kancinane, kodwa kubonakala ngathi wonke umntu uzaliswe kukungaqiniseki nangamajita angaphambi komtshato. Sihambile ukusuka ekucingeni ukuba zeziphi izibini eziza kuyenza ezantsi kwindlela yokucinga ukuba zikhona (okanye kufanele). Ukuba unomdla wokuba kutheni Usuku lwe-90 izibini ziyasokola, sonwabile ukukugcwalisa…
UMarko kunye noNikki: Siqala phi ngesi sibini? UNikki uyokuthenga kunye nentombi kaMark, uElise, kwaye bobabini babonakala ngathi bayayibetha. UNikki ufuna ngokungazenzisiyo umntu anokuzityand 'igila kuye, njengoko ethanda ukuhlala ethe cwaka xa ethandana nomyeni wakhe, ozimisele kakhulu kwiindlela zakhe. UMark uthatha isigqibo sokutshitshisa umtshakazi wakhe ukuba ahambe iintsuku ezimbalwa e-Ocean City. Njengesiqhelo, ubalisa amabali omfazi wakhe wangaphambili kunye nabanye abantu basetyhini kwakudala; UNikki ubonakala elusizi, ekugqibeleni evuma kuMarko ukuba akafuni kuva malunga nexesha lakhe elidlulileyo. Ngaba uMarko uya kuba nakho ukuqhubekeka kwaye ayeke ukuhlala kukuthandana kwakhe kungahambi kakuhle? Siyathandabuza, kodwa ixesha liyakuxela…
UFernando noCarolina: UCarolina useMelika ngoku! I-visa yakhe yamkelwa, kwaye ubuhle baseColombia abuchithanga xesha ukungena kwinqwelomoya ukuze baphinde badibane nomyeni wakhe. Uyonwabile, kodwa uyoyika… kwaye kufanelekile! Umama kaFernando ukulungele ukubetha uCarolina kwasekuqaleni, kwaye kuba esi sibini siza kuhlala nabazali bakaFernando, sixela kwangaphambili iimfazwe ezininzi zekati kwikamva elingekude kangako. Bobabini abasetyhini banobuntu obuqinileyo kunye nothando kuFernando. Umama wakhe uziva engabalulekanga kwaye uqinisekile ukuba unyana wakhe akazomdinga ngoku sele efikile umyeni wakhe. UFernando ngokuqhula ulindele ukuba abafazi baya kuba ziintshaba, kodwa siziva lukhulu ngakumbi kunotshaba kunabahlobo. Oh nkwenkwe…
UAleksandra kunye noJosh: Zonke izibini zihamba ngokukhawuleza, kodwa aba babini babala phantsi iintsuku kude kube ngumtshato wabo. Kusele iveki kuphela ukuba intombi yabo isetelwe ukuba ndiyenze, abazali baka-Aleksandra bangena beze emtshatweni. Emva kwentlanganiso yeemvakalelo kwisikhululo seenqwelomoya, zombini iiseti zabazali zaziswa omnye komnye. Endaweni yokuhlala ehotele, abazali baka-Aleksandra baya kuhlala okwethutyana nosapho lukaJosh. UAleksandra ungenelela njengetoliki ngenxa yesithintelo solwimi, kwaye abazali bakaJosh babeka iingqondo zikamama notata ka-Aleksandra, bebaqinisekisa ukuba ukuhlala njenge-Mormon akukhokeleli emadodeni atshate abafazi abaninzi. Ngaba uAleksandra noJosh baya kuba ngabokuqala ukuba nguMnu noNksk. Iminwe yethu iwelele iintaka ezincinci zothando.
UKyle kunye neMini: UKyle wothusa uNoon emsa kwitempile yamaBuddha eNew Orleans. Emini uziva usekhaya apho, kwaye siyazibuza ukuba indawo entle inokuba yindawo yomtshato yesi sibini. UKyle uyavuma kumtshakazi wakhe ukuba khange athethe nomama wakhe kwiminyaka eli-10. Emini ujolise kusapho kwaye ufuna ukuba umyeni wakhe afikelele kumama wakhe. Umama kaKyle unengxaki anganqweneli kuthwalisa umfazi wakhe wexesha elizayo. Nangona engangxami ukwabelana ngolwazi, siya simazi uKyle kancinci ngakumbi veki nganye. Ngokucacileyo khange abenayo imeko yosapho efanelekileyo ngaphambili, kodwa mhlawumbi ukutshata noNoon kuya kuba yindawo yokuguqula i-flirt bartender? Siza kubona…
UAlexei noLoren: Kwincoko yentliziyo emsulwa, uAlexei uxelele uLoren ukuba akanqweneli ukulandela umzekelo. U-Loren ubonakala ekulungele ukuvumela amaphupha akhe ukuba abe nemodeli yangaphantsi yomyeni ahambe, kodwa sinokukrokra okusolisayo kukho malunga nokubanentliziyo-neentliziyo ezizayo kungekudala. Ukuzingela nje!
UMelanie noDevar: Emva kokubaleka, esi sibini sithathe ikhefu kwaye sincokole malunga neenkxalabo zemali. UMelanie uziva uxinzelelo kwindima yakhe njengomboneleli wosapho kuphela, kwaye iindleko zomtshato ozayo zinaye. Umtshakazi uza kuya kwilokhwe yomtshato kunye nonina nabahlobo, ukhetha ukuzama iimpahla ezilula, ezingabizi kakhulu. Ufumana ilokhwe egqibeleleyo, ephawula enye into ekufuneka eyenzile kuluhlu lwakhe. Asikwazanga ukunceda kodwa siqaphele ukuba unyana kaMelanie akabonakalisanga kwiziqendu ezimbalwa ezidlulileyo. Ukungabikho kwakhe akunakuthetha nto, kodwa kusenza sizibuze…
Intloko yokroba: Izinto sele ziza kuba nomdla kakhulu kuAlexei noLoren! Kwisiqendu sesibhozo, sifunda ukuba udadewabo kaLoren kunye nomhlobo osenyongweni beza kutyelela, kwaye umcwangcisi wepati ye-bachelorette (umhlobo omkhulu kaLoren, uSarah) unezinto ezimbalwa ezimangazayo azigcinileyo. Emva kokudibana no-Alexei, uSarah akathandwa kangako ngumlingane wakhe we-BFF. Uyala ukubhengeza izicwangciso zeqela lakhe, kodwa xa uAlexei enyanzelisa ukuba kungabikho mqweqwedisi, isibongozo sakhe sidibana nokuthula okungathandekiyo. Sibona umdlalo weqonga elundini… njengesiqhelo.
ukuthi ndiyakuthanda ayingawo amagama
Nxiba undwendwe lomtshato wangokuhlwa
ubopha njani iqhina ngasekhohlo
thanda iikowuti ngaye ngokusuka entliziyweni
Bruno mars kunye noJessica caban iindaba zamva nje
yimalini ekufuneka uyichithe kumsesane womtshato